Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ ghaara ụgha | Bezzia
Maria Jose Roldan | 07/06/2021 22:00 | Mmekọrịta
Ọ bụghị ụgha niile bụ otu na ọ bụghị otu ihe ime ya n'emeghị ihe ọjọọ, na ime ya ihe ọjọ na imata na o gha ebutere onye ozo nsogbu. N'ihe banyere ndị di na nwunye, ịgha ụgha ugboro ugboro na mgbe niile ga-ebibi otu n'ime ụkpụrụ kachasị mkpa na mmekọrịta ọ bụla: ntụkwasị obi.
Enweghị ntụkwasị obi ị gaghị enwe ike inye gị nkwado maka ụdị di na nwunye ọ bụla nwere ike iwere dị ka ahụike. N'okpuru ọnọdụ ọ bụla, a gaghị ekwe ka otu n'ime ndị mmekọ ahụ jiri ụgha na-eme ihe mgbe niile ma ọ bụrụ na nke a emee, a ga-akwụsị ha ozugbo enwere ike.
1 Liegha di na nwunye
2 Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ ahụ gha ụgha
Liegha di na nwunye
Ọ bụ eziokwu na ụgha dị n'ehihie ma n'ihe banyere ndị di na nwunye nke a abụghị otu. Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụgha ndị a gụnyere ịhapụ ihe dị iche iche nwere ike inye aka mee ka onye ọlụlụ sikwuo ike. Ọ bụ ihe a maara dị ka ụgha ọcha ma ha na-achọ karịa ihe niile iji nye nchebe na ume ka ukwuu na mmekọrịta ahụ n'onwe ya. Kpamkpam dị iche iche bụ ụgha dị ka ndị dị otú ahụ na-eme ka nnukwu di na nwunye, ọbụna imebi uru dị mkpa dị ka ntụkwasị obi dị n'etiti mmadụ abụọ ahụ.
Ọ bụrụ na di na nwunye ahụ na-aghakarị ụgha, ọ dị mkpa ịjụ ase ma mata ihe kpatara ya ji agha ụgha n'ime mmekọrịta ahụ. Site na ebe a, di na nwunye na-ahụ maka ikpebi ma ha kpebie ịga n’ihu mmekọrịta dị otu a ma ọ bụ na ọ baghị uru ịnweta ohere nke abụọ wee belata ọnwụ ha. Ka o sina dị, ịnweghị ike ịnagide onye ụgha na-enweghị nchịkwa n'ihi na mmekọrịta ahụ ga-egbu egbu na enweghị ụdị ntụkwasị obi n'etiti ndị ọzọ.
Ọ bụghị otu ihe ahụ na di na nwunye ahụ ghara ụgha otu ugboro ma ọ bụ na ha na-agha ya n'ihi àgwà. Si ebe a, onye ahụ a ghọgburu ga-ajụ onwe ya ma onye nke ọzọ ò kwesịrị ntụkwasị obi ma ọ bụrụ na ọ dị ka ụkpụrụ ndị kwesịrị ịdị na mmekọrịta dị mma.
N’ọnọdụ nile, mkparịta ụka na nkwukọrịta n’ime di na nwunye bụ isi mgbe a bịara n’idozi ụdị nsogbu ọ bụla ma ọ bụ esemokwu ọ bụla nwere ike ịdapụta. Ewezuga nke a, aghaghi inwe nkwekorita nke ndi mmadu abuo, ebe ọ bụ na ọ bụghị na ọ bụ ihe nwere ike ime ọzọ na obere ma ọ bụ ọkara okwu.
Ebube onwe onye nke onye ahụ mejọrọ bụ akụkụ ọzọ nke ị ga-echebara echiche mgbe ị na-agbaghara ụgha. Ọ dịghị mfe ma ọ bụ dị mfe iji wughachi ntụkwasị obi mebiri emebi ma ọ bụrụ na ọnọdụ mmetụta uche dị ala ọ nwere ike isiri ike iweghachi mmekọrịta ahụ n'ụkwụ ya. Ọ bụ ya mere inwe ùgwù onwe onye n'ọnọdụ dị otú ahụ ji dị oke mkpa yana dịkwa mkpa. Ga-enwerịrị ezigbo ihe tupu iwere nzọụkwụ dị mkpa nke ịgbaghara onye ahụ na-agha ụgha na inye ha ohere nke abụọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ ahụ gha ụgha
Esi icho mma na ime obodo